C/raxman Diinaari oo sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka maamulka gobollada Galgaduud iyo Mudug – Radio Muqdisho
Siyaasiga C/llaahi Nuur Maxamed “Diinaari” ayaa sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka loo sameeyn doono gobollada Galgaduud iyo Mudug.
Xaflad balaaran oo lagu shaacinayay musharaxnimada C/raxmaan Diinaari ayna ka qeybgaleen xildhibaano, mas’uuliyiin kala duwan, saraakiil ciidan iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Taliyaha hogaanka socdaalka iyo Jinsiyadaha mudane C/llaahi Gaafoow oo xaflada ka hadlay ayaa ku tilmaamay C/raxmaan Diinaari inuu yahay siyaasi leh aqoon, karti iyo wadaniyad sidaasi darteedna uu ku haboonyahay qabashada xilka madaxnimada maamulka gobolada Galgaduud iyo Mudug.
Xildhibaan Qanyare oo isna hadlay ayaa soo dhaweeyay musharaxnimada Diinaari isagoo ku tilmaamay inuu u qalmo qabashada xilkaasi, wuxuuna u rajeeyay in uu ku guuleeysan doono madaxnimada maamulka gobolladaasi.
C/raxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa sheegay in uu taageero buuxda ka heysto Soomaalida ku nool dalka K/Sudan, kadib markii uu si wanaagsan ula shaqeeyay xilligii uu danjiraha ka ahaa dalkaasi, isagoo xusay inuu ka shaqeyn doono horumarka gobolladaasi.
Diinaari ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulka loo sameeyn doono gobollada Galgaduud iyo Galgaduud.